Amakhowa aneebhokisi zeekomityi zeqanda | Imisebenzi yezandla
Molweni nonke! Kule mveliso siza kubona ukuba njani yenza le mushroom ebomvu ebomvu kunye neebhokisi zeqanda. Kulula kakhulu ukwenza kwaye kuya kuphila kwigumbi labancinci endlwini kunye nexesha lokuzonwabisa ngelixa usenza ubugcisa.
1 Izixhobo esiza kuzidinga ukwenza amakhowa ethu amnandi
Izixhobo esiza kuzidinga ukwenza amakhowa ethu amnandi
Iibhokisi zeqanda. Ngokufanelekileyo, thatha ibhokisi yeqanda engwevu ukuze ungapeyinti ngaphezulu kwenxalenye enye.
Isiphawuli esibomvu okanye naluphi na olunye uhlobo lwepeyinti yekhadibhodi. Unokukhetha omnye umbala ofana noluhlaza okotshani okanye oluhlaza okwesibhakabhaka ukuba uwuthanda ngcono.
Glue kwikhadibhodi okanye kwi-silicone eshushu.
Ikhadibhodi emhlophe okanye amaphepha.
Uyayibona indlela yokwenza eli nyathelo lobugcisa ngenyathelo ngokubukela le vidiyo ilandelayo:
Inyathelo lokuqala ngu usike umngxunya kwikomityi yeqanda yekhadibhodi eya kuba ngaphezulu kwekhowa. Siza kusika nenye yezahlulo zekomityi yeqanda ukwenza isiqu Amakhowa. Siwalingana la maqhekeza ukuze sibone ukuba ajongeka njani kwaye sikwazi ukusika kancinci ukuba sikhetha.
Sipeyinta indawo eza kwenza ikomityi yamakhowa kwaye siyilinda ukuba yome kuxhomekeke kuhlobo luni lwepeyinti esiyisebenzisileyo. Ukuba sisebenzisa isiphawuli siya kukhawuleza kwaye singaqhubeka nokwenza ubugcisa kwangoko.
Sincamathisela la macandelo mabini ukuze amakhowa anyuswe. Ukwenza oku, siza kufaka iglu ngaphakathi kwindebe kwaye siza kukhama umboko ukuze uncanyathiselwe kakuhle.
Ngoku lixesha lokuyihombisa. Ngenxa yoko siza kuya usike isangqa esincinci kwikhadibhodi okanye ephepheni ukuba sizakubetha kuyo yonke iglasi.
Ekugqibeleni siya kuthi namathela amehlo ngokokubonakala kwazo. Sinokongeza uncumo ukuba siyafuna.
Kwaye ulungile! Sigqibile ikhowa yethu entle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla » Amakhowa aneebhokisi zeqanda
Chick nge pom pom